अस्ट्रेलिया बाट आयो रबि लामिछानेको लागी यस्तो सुझाब ! के यो सम्भव होला त ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
अस्ट्रेलिया बाट आयो रबि लामिछानेको लागी यस्तो सुझाब ! के यो सम्भव होला त ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं । काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित न्यूज २४ को कार्यालयबाटै कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’का प्रस्तोता/पत्रकार रवि लामिछाने र टिभी जर्नलिष्ट युवराज कँडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।सामाजिक सञ्जालमा प्रसार भएको पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणबारेको विषयवस्तुमा छानविन तथा सोधपुछका लागि प्रहरीको टोलीले पत्रकारद्वय लामिछाने र कँडेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
एता रबि लामिछाने नियन्त्रणमा लिए संगै उनकै नजिकको ओकिल स्वागत नेपालले भने रविको टिमलाइ घुमाउरो पाराले प्रहार गरेका छन। एक कठोर पत्रकार माथि कमजोर बनाउन केटि प्रयोग गरि फसाएको भन्दै छानबिनले सत्य के हो सबै देखाउने उनि बताउछन।प्लान गरि गरि म्यासेज समेत पाएको भन्दै उनले अब कोहि नचोखिने बताएका छन। त्यस्तै अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका शिव न्यौपानेले आफ्नो बिशेष तर्क राखेका छन् आखिर के हुन् सक्छ त बास्तविकता पुरा भिडियो हेर्नुहोस !